musha nyika dzakabatana Singers Kendrick Lamar Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
CB inopa Nhoroondo Yakazara yemuimbi weAmerica ane zita rezita "K-Dot". Yedu Kendrick Lamar Childhood Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Ehe, munhu wese anoziva kuti ndiye mumwe weanobudirira hip hop maartist. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Kendrick Lamar's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Kendrick Lamar Upenyu hwepakutanga uye Yepamberi Yemhuri:
Rapper Kendrick Lamar Duckworth akazvarwa pazuva re17th raJune 1987 kuCompton, muCalifornia USA Iye aive wekutanga pavana vana vakazvarwa naamai vake, Paula Oliver uye kuna baba vake, Kenny Duckworth.
Kunyangwe Lamar akaberekwa uye akakurira muCompton, guta raizivikanwa nekuberekera matsotsi mazhinji kupfuura ma rappers, akakura kuva nyika yeAmerican nyika yedzinza rechitema ine Afro-American midzi.
Kukura muCompton pamwe chete nasisi vake Kayla nevanun'una vaviri, Lamar aive mwana akanaka muguta rine mukurumbira umo kushandisa zvinodhaka uye hondo dzechikwata ndidzo dzaive tsika dze1900s. Nekudaro, iye akange asina kana pfupa rimwe rehutsinye maari uye akatemerwa kwechikamu chiri nani chemakore ake ekuumbwa.
Kendrick Lamar Dzidzo uye Basa Rekuvaka:
Lamar akapinda chikoro cheMcNair Elementary muCompton asati aenderera kuVanguard Learning Center - zvakare muCompton - yekuchikoro chepakati. Ndichiri kuVanguard Kudzidza Center, Lamar akatamba basketball uye akarota kuzviita kuNBA. Nekudaro, kutsvaga basketball mune yaLamar yekuita-rondedzero yakave yakafanana nekutsvaga mapini mumatura mushure mekunge mudzidzisi weChirungu anonzi Mr Inge amuunza kunhetembo.
Mushure meizvozvo, Lamar akatamba chinyoreso pabepa achinyora nhetembo dzinorondedzera dzakagadziriswa mumazwi. Akaenderera mberi achiita chishuwo chake chekunyora kunyangwe achifunda kuCentennial High School Compton uko kutevedzera kwake kwakanangana nevadzidzi kwakamuona achive akatwasuka-A - mudzidzi.
Kendrick Lamar Kurapwa Kwepakutanga Hupenyu:
Paakapedza chikoro chesekondari, Lamar akafarira zano rekuenda kukoreji asi aive atove nemari yakawanda mukugadzira mixtapes. Mixtape yekutanga yaLamar yakanzi "Mudiki Musoro Nigga muCharge" yakaburitswa pasi pezita rezita K-Dot ndokuenderera mberi kuva chirongwa chakabudirira chisina kungomuita mukurumbira nevanhu vemuCompton asi vakamutorera kondirakiti yekurekodha neTop Dawg Entertainment ( TDE).
Anotevera zviitiko zvekutanga zvebasa akaona Lamar achisimbisa "mwana wake mutsva pachigaro chechikamu" nekushanda pamwe nevaimbi vakaita saJay Rock naJa Boy. Akatotora rapper The Game kuti amuratidze mu 'Iyo Cypha' uye akaenderera mberi nekutora yake inotevera mixtape "C4" inoiswa pa Lil Wayne's 'Iyo Carter 111 LP'.
Kendrick Lamar Road To Fame Nyaya:
Mushure mekuwana ese mabhokisi ekucherechedza aakaraira kuti aunzwe pasuwo pake, mubvunzo pamiromo yega yega yeva fan ukava "Lamar achaburitsa rwiyo rini"? Achipindura, Lamar akaburitsa imwe mixtape yakanzi "Akanyanyisa kuzvipira", achipa fungidziro yekuti akasungirwa kuburitsa mixtapes chete.
Lamar paakazoburitsa dambarefu redamba studio "Chikamu.80" mu2011, yakango pfuura nepanzvimbo yechi13 pabillboard 200. Zvisinei, akaramba achishingaira muindastiri uye akazorodzwa kubatana neWindows Phone mukugadzira rwiyo rwekutanga yakanzi "Cloud 10" pamwe nekushandira pamwe nevanoverengeka vane mukurumbira wehip hop maartist, kusanganisira Busta Rhymes, Snoop Dogg uye Iyo Game.
Kendrick Lamar Kakwira Kuzivikanwa Nhau:
Gore rakatevera muna 2012, Lamar akarekodha budiriro yake yekutanga pamwe nekuburitswa kwake kwechipiri studio studio "akanaka mwana, mAAd guta" Iyo yakaverengerwa panhamba mbiri muUS, yakatengesa anopfuura 242,100 makopi muvhiki yayo yekutanga uye akazosarudzwa kune ane mukurumbira Mubairo weGrammy.
Achimhanyisa kumberi kusvika parizvino, Lamar inyanzvi uye anozvishambadza anozivikanwa muenzi ane angori 4 maalbuboni neazvino ari "Damn" (2017). Akakunda zvakare asingasviki gumi nemaviri maGrammy mibairo panguva yekunyora. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Kendrick Lamar Hukama Hupenyu:
Nemakore anodarika gumi akashandiswa muindastiri yemimhanzi, Lamar anogona kutariswa semunhu akazara asingateedzere, kwete nekuda kwezvematongerwo enyika asi nenzira yaanotarisira hupenyu hwake hwerudo zvinopesana neyakajairwa tsika dzepop. Kuongororwa kwenhoroondo yekudanana kwemurapi kunoratidza kuti anga achingova nemukadzi mumwe chete - Whitney Alfred waakasangana naye panguva yake yechikoro chesekondari.
Shiri dzerudo dzisina kumbobvira dzasangana pakati pekufamba kwenguva refu kwaLamar kuenda mukubudirira kwemimhanzi dzakabatanidzwa muna Kubvumbi 2015 uye vakaita mwanasikana pamwechete muna Chikunguru 2019. Hazvina kutora nguva refu vaviri vasati varoora sezvo vatove nemwana wekusimbisa hukama hwavo.
Kendrick Lamar Hupenyu Hwemhuri:
Nezve hupenyu hwemhuri yaKendrick Lamar, anobva kumhuri yepasi-yemhuri kirasi kumashure. Isu tinopa chokwadi nezve nhengo dzemhuri yake.
Nezve baba vaKendrick Lamar:
Kenny Duckworth ndibaba vaLamar. Aive akaroora amai vaLamar gore risati rasvika 1984 uye aigara naye kuChicago. Ndichiri kuChicago, Kenny akaumburuka nechikwata cheSouth Side mumugwagwa chinozivikanwa seGangster Vadzidzi vasati vaenda nemukadzi wake kuCompton uko Lamar akaberekwa makore matatu akatevera. Ivo baba vanotsigira avo vakamboshanda kuKFC vanoda Lamar uye vaivapo mune dzinoverengeka nguva dzeraperi isingakanganwike kusanganisira kutakura Lamar ane makore masere pabendekete rake kuti aone Dr Dre na8pac vachipfura vhidhiyo yeCalifornia rudo muCompton.
Nezve amai vaKendrick Lamar:
Paula Oliver ndiamai vaLamar. Akashanda kwaMcDonald panguva yehupenyu hwaLamar achiri mudiki uye haana kumbopotsa kufamba naye kumba achibva kuchikoro. Paula ndiye munhu wepedyo kumoyo waLamar uye ane ndangariro dzakajeka dzehunhu hwake hwehudiki. Izvo zvinokwana kucherechedza kuti amai vevana zvese zvese zvakanaka kuna Lamar kusanganisira kuve iye mukurusa fan yake sezvaakamutumira imwe yeanonyaradza meseji zvichitevera kuburitswa kweyechina dambarefu rake "Damn" (2017).
Nezve hama yaKendrick Lamar:
Lamar ane vanin'ina vaviri pamwe nasisi vadiki. Hazvina zvakawanda zvinozivikanwa nezvevadiki maDuckworths panguva yekunyora chengetera hanzvadzi yaLamar mudiki Kayla Duckworth aive amai vevana vaviri pamakore gumi nemanomwe. Kayla akazvara mwana wake wekutanga aine makore gumi nematatu nepo wechipiri mwana akauya 17 makore akazotevera. Nerutsigiro rwaLamar nevabereki vake, Kayla akasimuka pamusoro pekukanganisa kwekuzvara kwekutanga uye akapedza chikoro chesekondari muna 13 kusvika pakufara kwaLamar uyo akamutengera 4 Toyota Camry.
Nezve hama dzaKendrick Lamar:
Achienda kure nemhuri yepedyo yaLamar, hapana zvinyorwa zviripo zvaasekuru nasekuru vake pamwe nasekuru vake nasekuru vake. Uye zvakare, zvishoma zvinozivikanwa nezve babamunini vaLamar, vanatete, babamunini uye babamunini apo hama dzake hadzina kuzivikanwa muzviitiko zvine mukurumbira zveupenyu hwake hwepakutanga kusvika zvino.
Kendrick Lamar Hupenyu hweMunhu:
Achienderera kuhunhu hwaLamar, ane anoshamisa Persona ayo anosanganisa akawanda anogadzira kugona kweavo vanhu vane hunhu kana hunhu husiri hwevatorwa kune Gemini Zodiac chiratidzo.
Zvikuru kudaro, Lamar anoshamisa, ane moyo muhupfumi, anogadzira uye haawanzo kuratidza zvinhu nezvehupenyu hwake hwega uye hwepachivande. Zvaanofarira kuita uye zvaari kufarira zvinosanganisira kutamba basketball, kupedza nguva nemhuri yake neshamwari pamwe chete nekuwona mafirimu.
Kendrick Lamar Mararamiro:
Taura nezveMararamiro aLamar, ane mari inofungidzirwa kuti inosvika madhora makumi mana nemashanu panguva yekunyora. Mhedzisiro kubva pakuongororwa kwenzvimbo dzinoumba hupfumi hunokurumidza hwaLamar zvinoratidza kuti anowana mari yakawanda mumimhanzi mari uye zvibvumirano.
Nekudaro, rapper ane zvinhu zvinopopota zvakasarudzika zvakamupoteredza kusanganisira $ 4.2 mamirioni imba muCompton California. Imba yacho ine kukwira miti, dziva rinoyerera pamwe nezvimwe zvinozorodza maficha. Iyo zvakare ine yakakwana nzvimbo yekupaka yekutakura mota yaLamar iyo inozvirumbidza nezvevatasvi vakaita saFerrari, Range Rover uye Chevrolet.
Kendrick Lamar Untold Chokwadi:
Kuunza mugumo kune yedu inonakidza Kendrick Lamar nyaya yehucheche uye bio, heano mashoma asinganetsi-anoziva chokwadi nezve rapper.
"Kendrick Lamar" harisi nick asi mazita chaiwo anodudzira se "shasha huru" (Kendrick) uye "yegungwa" (Lamar) zvichiteerana. Uye zvakare, Kendrick anozivikanwa neHighland Scots nepo Lamar aine mavambo echiFrench-Norman.
Lamar ndiChristain uye akazvipira kune izvo. Haambozununguki kutaura nezvekutenda kwake panguva yekubvunzurudzwa uye nekutamba. Iye anotenda Mwari nekuda kwekusimudzira kwake kumukurumbira uye nekumuchengetedza kubva pakusvibisa kwetsika iyo yakatambudza Compton mu1990s.
Iwe unoziva here kuti Lamar aigara achiputa cannabis isati yaita chisarudzo chekukandira tsika iyi? Uye haapiwi kunwiwa nekuti akamwa kupfuura zvakaringana kweupenyu hwese mukukura kwake.
Iyo rapper haina kukura pamatatoo. Asati asimuka kumukurumbira aive aine tattoo kuruoko rwake rwerudyi iyo inoti "Hustle kunge iwe watyoka". Iyo hunyanzvi hwemuviri hwakagara kusvika Chivabvu 2019 paakaifukidza nehunyanzvi hutsva. Chokwadi akagadzira zvakakwana kuti ave nechivimbo chekuti haazomboputsa.
Thanks for reading vedu Kendrick Lamar Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At childhood biography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!